Corona Iyo Cannabis: Coronavirus Catalyst For Cannabis Stocks • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha Corona iyo xashiishadda: coronavirus waxsoosaarka saamiyada xashiishadda
maqaal by Ties Inc. March 4 2020
Ma sameyn kartid kanaal ama waxay ku saabsan tahay fayraska loo yaqaan 'corona virus' kaasoo horeyba ugu dhacay ku dhowaad 90.000 oo qof ayna dileen ilaa 3000 oo qof. Wall Street waxay ka baqeysaa masiibo, oo keenta isbeddel ballaaran. Laakiin ka warran maalgashiga xashiishka iyo kaydka markii uu fayrasku sii socdo?
1 Corona & dhilleysi dibadda ah
2 Xashiishadda maxalliga ah
Suuqyada saamiyada ayaa burburay maxaa yeelay dhoofinta iyo ka ganacsiga Shiinaha iyo dalal kale ayaa curyaamiyay. In kasta oo ku dhowaad dhammaan warshadaha ay dhibtoonayaan, coronavirus ayaa horseed u noqon kara maalgashadayaasha xashiishka. Shayga waxaa laga soo saaraa meelo badan, sida Ameerika iyo Kanada, sidoo kale waxaa lagu iibiyaa waddanka asalka ah. Dhoofinta macnaheedu sinaba marwalba kuma lug laha, taas oo macnaheedu yahay in suuqa xashiishka uu si macquul ah uga go'doonsan yahay naxdinta dhaqaale ee uu sababo fayrasku.
Corona & dhilleysi dibadda ah
Fayraska lama filayo inuu dunida ka maqnaado weli. Dadku waxay isku dayaan inay si xaddidan u xaddidaan si looga hortago faddarayn cusub. Shiinaha maahan waddanka ugu caansan hadda, laakiin waa maxay jahwareerka aan ka soo bixin Shiinaha maalmahan? Dhaqaalahan adduunka wuxuu saameyn weyn ku leeyahay ganacsiga iyo suuqyada adduunka. Shirkado badan ayaa si gaar ah ugu tiirsan Shiinaha waxyaabaha ay soo saaraan. Hanti-wadaagga sida ugu fiican. Xitaa shirkadaha Mareykanka waxay ku dhex ordeen hubka Shiinuhu diyaar u yahay maxaa yeelay wax soo saarka ayaa ka jaban halkaas. Dhillaysigaan banaanka laga keenayo ayaa haatan waxa uu keenayaa dhibaatooyin waa weyn waxa ayna umuuqataa in waqti laga joogo kahor inta aysan shirkadaha fashilmin. Kaydka ayaa dhammaanaya, oo joojiya iibka.
Xashiishadda maxalliga ah
Suuqyada maxalliga ah ayaa ka faa'iideysan doona tan ugu badan. Tani waxay ina keenaysaa saamiyada xashiishadda sida CGC (Canopy Growth Corporation). Beerista, iibinta iyo isticmaalka xashiishadda ayaa badanaa lagu matalaa wadan ama gobol. Sida saxda ah, wax dhoofinta iyo khalkhal ma gelin silsiladda sahayda. Gobollo badan oo Ameerika iyo Kanada hadda waa run. Meesha fayrasku si xoogan u saameeyo suuqyada kale, xaalado badan ma saameyn ku yeelanayso suuqa cannabis. Weli waa la saadaalinayaa xilligan, laakiin waxay umuuqataa caqli gal inaad ka jawaabto tan sidii maalgashi.
Dawladda federaaliga ah ee America waxay ka caga jiideysaa inay sharci u siiso (dawooyinka) cannabis meelwalba. Fayraska corona wuxuu sababi karaa dabeecaddan difaaceed inay is beddesho. Sharaxaad ku saabsan diidmadaan ayaa ah in xashiishadda dawooyinka ay abuuri karto tartan marka loo eego shirkadaha dawooyinka waaweyn. Si kastaba ha noqotee, daawooyin badan ayaa ka yimaada Shiinaha, sahaydii ay hadda carqaladeeyeen. Fikrad ahaan, horudhac horudhac u ah xashiishadda dawada ayaa yareyn lahayd xaaladdan.
Akhri wax dheeraad ah Investorplace.com (Source, EN)
Isticmaalka xashiishka ayaa si heer sare ah ugu kacda Nederland
Dukaammada casriga ah iyo kuwa jumlo-iibiyeyaasha ah ee alaabada casriga ah ee cadaadiska saaran...
3 Oktoobar 2020
Mike Tyson waxa uu sanduuqa ku duugay caleen caws isaga u gaar ah oo...
Afka xayawaanku waxay ku buufiyaan Alzheimers